Muj.Xassan Ciise Oo Si Adag U Dhaliilay Xukuumada , Madaxweyne Siilanyo na Ku Timaamay Hogaamiye Si Khaldan U Isticmaalaya Awoodii Dawladeed | Berberatoday.com
Muj.Xassan Ciise Oo Si Adag U Dhaliilay Xukuumada , Madaxweyne Siilanyo na Ku Timaamay Hogaamiye Si Khaldan U Isticmaalaya Awoodii Dawladeed
April 8, 2016 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Mujaahid Xasan Ciise Jaamac ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wax yaabaha hortaagan ictiraafka Somaliland, isla markaana waxa uu Madaxweyne-SIILAANYO ku eedeeyey inay ku aar-goosanaayo awoodii dawladeed ee ay ahayd inay umadda dhex u ahaato.
Mujaahid Xasan Ciise Jaamac waxa uu sidaa ku sheegay Warsaxafadeed uu ku saxeexan-yahay oo caawa nuqul ka mid ah uu soo gaadhsiiyay Xafiiska Shabakada Wararka ee Ilaysnews waxaanu u dhignaa sidan:
“Soomaalidu waxay tidhaa wixii tagay tiigsimaad ma leh.waxay iloobeen inay ku daraan wixii tagayse isaga ayaa soo tiigsanaaya xaaladaha dambe ee taagan.
Todobaatankii sanadood ee u dambeeyay nidaamka aduunka ka shaqeeya,sida Baanka adduunka, Qasnada caalamiga ah ee IMF, Jimciyada Qaruumaha ka dhaxaysa,Gaashaan buurta NATO iyo cilaaqaadka Dawladda, Barriga iyo Galbeedka iyo kuwa hore u maray iyo kuwa soo koraya, waxa weeye natiijaddii ka dhalatay dagaalkii dunida ee labaad.
Dhinaca Somaliland go’aankii la gaadhay 26 June 1960 in Xamar lagu biiro ayaa maanta hortaagan ictiraafkii. Waxa kale oo hortaagan go’aanka aan la gaadhin ee aan lagu biirin barwaaqa sooranka.
Haatuf lama garan waayin in la yidhaahdo,sida caadiga ah, waanu aqoonsanay warkii aad arintaas ka qorteen, ee imika soo qora warkan kale ee kaas hore ka soo horjeeda, si ay akhristayaashu u fahmaan warka iyo dooda dhinacayagana.
Waxa lagu qaaday colaad hore oo wakhtigii SNM loo qaaday hogaanka Haatuf. Sida xaqsoor loogu qaaday colaad hore loogu qaaday hogaanka Ururkaas. Waxa lagu aargoosanayaa awoodii dawladeed ee mudada kooban amaanada loogu hayey ey ahayd inay dadka dhex u ahaato. Waxaana lagu aargoosanayaa dembiyo aan laga gelin.
Colaadihii hore kuwa wakhti dheer socda ayaa la odhan jiray,wiilkii dhashay colaadaas oo socota ayaa isagoo weynaaday ka qaybgalay. Colaadaha noocani marka ay sii socdaan ee dad aan wakhtigay bilaa bantayba joogin soo galaan ee dameeri dhaan raacday miidhan; soo dulbuuxiyaan iyaga oon fahansanaynba meel la iskala qaaday, wax keliya ee kuu furani waa inaad Ilaahay arinta u celiso ood tidhaahid Allahayoow dadkaagan u kala markhaati fur intaanad kala dirin Aamin.”